Sida Loo Codsado Oo Loogu Guuleysto Vanier Canada Graduate Scholarships 2022
Sida loo Codsado Oo Loogu Guuleysto Deeqda waxbarasho ee 'Vanier Canada Graduate Scholarships'
Waxaad had iyo jeer rabtay inaad ogaato waxa ku saabsan deeqaha waxbarasho ee qalin jabinta Vanier Canada oo ku saabsan, waxaad timid bogga saxda ah. Maqaalkani wuxuu kakooban yahay casriyeyn, macluumaad faahfaahsan oo faahfaahsan oo ku saabsan deeqda waxbarasho oo ay ku jiraan sida loo codsado loona guuleysto sidoo kale.
Waxaa jira in kabadan boqol deeq waxbarasho oo laga heli karo Kanada oo ay bixiyaan iskuulada, ururada, shaqsiyaadka ama dowlada ee ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah inay wax ku bartaan Kanada iyadoon laga walwalin dhaqaalaha maadaama deeqaha waxbarasho ay gacan ka geysan karaan maalgelinta khidmadaha waxbaridda ama ay u fidiyaan ardayda kale baahidooda. .
Deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa muwaadiniinta Canadian ama ardayda gudaha ah, muwaadiniinta ajnabiga ah ama ardayda caalamiga ah iyo deganayaasha joogtada ah ee Kanada. In kasta oo deeqaha waxbarasho qaarkood la bixiyo sannadle qaar dhammaantood dhawr sano ayay jiraan qaarna mar uun bay yimaadaan oo dib dambe uma soo noqdaan.
Ardayda waxaa la siiyaa deeqo waxbarasho sababo badan awgood laakiin sababaha ugu waaweyn waxay ku saleysan yihiin baahi iyo mudnaan mararka qaarna labadaba, aan si sax ah u sharraxo.
Deeq waxbarasho oo ku saleysan: Kuwani waa deeq waxbarasho oo lagu abaal mariyo waxqabadka akadeemiyadeed ee ardayga iyo xirfadaha hoggaaminta. Marka ardayda had iyo goor ku muujisa heer sare akadeemiyadooda iyo xitaa waxqabadyada manhajka ka baxsan waxay heli karaan deeqo noocan ah.
Deeqaha ku saleysan baahida: Noocyada deeqaha waxbarasho waxaa la siiyaa ardayda ka soo jeeda saboolka liita, dhaqaalaha kobcaya, waddamada ay dagaaladu aafeeyeen ama ay muujiyeen inay wajahayaan arrimo dhaqaale.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in deeqaha waxbarasho qaarkood lagu bixiyo iyadoo lagu saleynayo mid ka mid ah baahiyahan halka qaarna lagu bixiyo iyadoo loo eegayo labada baahiyoodba iskuulada qaarkoodna waxay leeyihiin qiimeyn gaar ah oo ay ku bixiyaan abaalmarinta deeqaha waxbarasho.
Deeq waxbarasho oo kasta oo la bixiyo waa inay had iyo jeer hoos timaaddaa laba qaybood oo kala ah;
Deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo; tani waa deeq waxbarasho oo dabooleysa wadarta kharashka waxbarashada ardayga illaa ay ka qalin jabinayaan. Waxay ka kooban tahay khidmadaha waxbarashada, hoyga, kharashyada nolosha iyo ardayda caalamiga ah, waxay u sii socotaa inay daboosho tikidhada duulimaadka iyo caymiska caafimaadka.
Dawladda Kanada waxay bixisaa daraasiin deeq-waxbarasho oo si buuxda loo maal-geliyo sannadle waxaana haysannaa maqaal dhowaan la cusbooneysiiyay oo aan ku taxnay 13 deeq-lacageedka ugufiican ee deeq-lacageedka dawlada Kanada iyo faahfaahintooda.
Deeqaha waxbarasho ee qayb ahaan la maalgeliyo; deeqda waxbarasho ee noocan ahi waxay daboolaysaa kala bar deeqda waxbarasho ee ardayga, waxay dabooli kartaa mid ama in ka badan oo ah baahida ardayga. Waxay dabooli kartaa oo keliya khidmadaha waxbaridda ama hoyga keliya, ama waxay siin kartaa oo keliya qalab waxbarasho muddo sanado ah oo la siiyay oo ardayga loogu talo galay inuu dugsiga ku jiro.
Waxa kale oo jira noocyo kale oo gargaar lacageed ah oo ay bixiyaan jaamacaduhu oo ay jiraan waxyaabo waxtar leh oo ku saabsan jaamacadaha Kanada oo bixiya kaalmo lacageed ardayda caalamiga ah
Isku soo wada duuboo, deeqaha waxbarasho ayaa wali kaa caawin doona inaad ku maalgeliso waxbarashadaada hal dhinac ama mid kale waana wax aan la soo celin karin, dib u soo celin doonin.
Kanada Meel Barasho
Kanada waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee wax lagu barto ee adduunka oo dhan waddanku laftiisa ayaa helay aqoonsi caalami ah oo ku saabsan heerkaas tanina waxay ugu wacan tahay sida loola tacaalayo barayaasha iyo ardayda.
Kanada waxay hoy u tahay kumanaan arday caalami ah, waddanku waa la ogyahay inuu albaabbadiisa u furey qof kasta oo ka kala yimid daafaha dunida oo dhan si uu uga qayb qaato waxbarashadeeda heer caalami ah ee jaamacadeed, cilmi baaris iyo inuu ku raaxeysto magaalooyinkeeda.
Meel leh mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya ee dembiyada adduunka iyo cimilada weyn sidoo kale, waxay si isku mid ah uga dhigeysaa bay'ad badbaado leh oo ku habboon waxbarashada ardayda.
Kanada sidoo kale waxaa loo yaqaanaa inay siiso deeq waxbarasho deeq-lacageed sanadle ah ardayda heerarka iyo heerarka kala duwan ee waxbarashada sida deeqaha waxbarasho ee hoose, dibloomada sare iyo deeqaha qalin-jabinta. Sababtoo ah sida deeqsinimada leh ay u yihiin, waxay ka soo jiitaan ardayda dhammaan qaybaha adduunka inay awoodaan inay helaan waxbarasho tayo leh.
Deeqda waxbarasho ee Vanier Canada waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee badan oo ay kafaala qaado dowladda Kanada waana tan maqaalkani ku saabsan yahay.
Deeqda waxbarasho ee Vanier Canada
Barnaamijka Vanier Canada ee deeqda waxbarasho (Vanier CGS) waxaa la bilaabay sanadkii 2008-dii oo ay sameysay dowladda Kanada, waxaa loogu magac daray barasaabkii ugu horreeyay ee ku hadla franfoon-ka guud ee Kanada, Major-General Georges P. Vanier.
Deeqdan waxbarasho ayaa loo bilaabay si loo soo jiito loona xajiyo ardayda heerka caalami ee dhakhaatiirta ee Kanada sidaa awgeedna lagu aasaasayo waddanka xarun caalami ah oo heer sare ah oo ku wanaagsan cilmi baarista iyo tacliinta sare.
Vanier CGS waa deeq waxbarasho oo sanadle ah oo la siiyo 166 arday oo ka qalin jabisay Canadian-ka, waxay u dhigantaa $ 50,000 sanadkiiba muddo seddex sano ah inta lagu gudajiray barashada dhakhaatiirta waxaana loo aasaasay inay ka caawiso hay'adaha Kanada inay soo jiitaan ardayda takhasuska sare leh.
The Vanier Canada deeqda waxbarasho ayaa ah mid ay maalgeliso dowladda, oo ay maamusho saddexda hay'adood ee bixiya cilmi baarista federaalka ee Kanada oo kala ah;
Machadyada Canadian Research of Health (CIHR)
Golaha Sayniska Dabiiciga ah iyo Golaha Cilmi-baarista injineernimada (NSERC)
Golaha cilmi baarista bulshada iyo bulshada (SSHRC)
Vanier CGS wax badan ayaa u qalma oo waxaa si aad ah u doonaya ardayda adduunka oo idil, haa, way u furan tahay arjiga dhammaan ardayda qalin-jabisay labadaba ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Shuruudaha Xulista ee Vanier Canada Scholarships Graduate
Waxaa jira saddex shuruudood oo xulasho oo codsadayaashu ay tahay inay lahaadaan si loogu xusho deeqaha waxbarasho ee qalin-jabinta Vanier Canada, waxay kala yihiin;
Awood Cilmi baaris
Waxaa jira faahfaahin aad u muhiim ah codsadayaashu waxay u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan mid kasta oo ka mid ah shuruudaha xulashada ee kor ku xusan.
Heer Sare Tacliin: Tani waxay muujineysaa codsadayaasha taariikhda cilmi baarista iyo saameynta waxqabadyadooda tacliimeed ilaa maanta meelaha ay ku takhasusaan iyo bulshada la xiriirta cilmi baaristooda waa tilmaamayaal muhiim ah oo ku saabsan kartidooda hoggaamiyeyaasha cilmi baarista ee berrito
Heerka aqooneed ee codsadaha waxaa lagu caddeyn doonaa iyada oo loo marayo afar dukumiinti, qoraallada jaamacadda, warqadda magacaabista hay'adaha, CV-ga guud iyo bayaanka hoggaamineed shaqsiyeed ee muujinaya natiijooyinka tacliimeed ee la soo dhaafay, faallooyinka jaamacadda, abaalmarinta iyo muddada daraasadihii hore.
2. Awood Cilmi baaris: Tani waxay muujineysaa cilmi-baarista la soo jeediyey ee musharraxa iyo waxtarka ay u leedahay horumarinta aqoonta berrinka iyo natiijooyinka la filayo. Halka laga helayo suurtogalnimada cilmi baaris ee musharraxa waxaa lagu muujin doonaa dukumiintiyada soo socda;
CV-ga caadiga ah
Qoraalka hogaaminta shaqsiyeed
Ku darsaday cilmi baaris
Soo jeedinta cilmi baarista
Dukumiintiyada kor ku xusan waxay muujinayaan macluumaad aad muhiim u ah oo ku saabsan musharaxa sida tababarka tacliinta iyo khibrada shaqo ee khuseysa (iskaashatada waxaa ka mid ah), ka qayb qaadashada musharaxa ee cilmi baarista iyo horumarinta, xamaasada murashaxa ee cilmi baarista, awooda fikirka xasaasiga ah, codsi aqoon, xukun, dadaal, madaxbanaani iyo asal ahaan.
Hogaaminta: Ka qaybgalkan saamaynta leh ee murashaxa iyo ku-guuleysiga ka-baxsan manhajka iyo howlaha siyaasadeed sida hoggaamiyaha dowladda ardayda, xubinta guddiga isboortiga, khibradda kormeerka iwm.
Kuwaani oo dhami waa lagama maarmaan in loo xusho deeqda waxbarasho ee qalin jabinta Vanier Canada.
Shuruudaha U-Qalmitaanka ee Vanier Canada Graduate Scholarships
Ka dib marka ay tahay inaad ka gudubto shuruudaha xulashada kor ku xusan, waxaa jira shuruudo u-qalmitaan gaar ah oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kahor intaadan dalban deeqda waxbarasho ee Vanier Canada waana inaad si isku mid ah u dhaaftaa dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka ee magacaabistaada si loo aqbalo.
Musharrixiinta waa inay u hoggaansamaan shuruudaha soo socda;
Marka hore, murashaxu waa inuu noqdaa arday dhammaystiran oo diiwaangashan oo ka tirsan hay'ad Canadian ah oo la aqoonsan yahay iyo hay'addaas waa inay heshay Qoondeynta Vanier CGS uu soo gudbiyay musharaxa.
Muwaadiniinta / ardayda soo socota waxay xaq u leeyihiin in loo sharaxo deeqda waxbarasho ee Vanier Canada;
Deganaanshaha joogtada ah ee Kanada
Waxyaabaha kor ku xusan waxaa sidoo kale loo turjumi karaa ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Si aad ugu qalanto dhammaan codsadayaashu waa inay hoos yimaadaan saddexda aag cilmi-baaris kuwaas oo kala ah;
Cilmi baaris caafimaad
Cilmiga dabiiciga ah iyo / ama cilmi baarista injineernimada
Cilmiga bulshada iyo cilmiga aadanaha
Kaliya dadka daraasaddooda waxbarasho ay ku saleysan tahay meelaha kor ku xusan ee cilmi-baarista ayaa loo baahan yahay waxayna ku sii wadi karaan codsiga Vanier CGS.
Ayaa Codsan Karaa Deeqaha Qalinjabinta ee Vanier Canada?
Kuwa soo socdaa waa shakhsiyaad dalban kara Vanier CGS;
Codsadeyaashu waa inay soo magacaabaan hal hay'ad oo Canadian ah oo ay tahay inay heshay kooto Vanier CGS.
Noqo arday buuxa oo diiwaangashan machadka la magacaabay ee Kanada oo aad ku raadjoogto shahaadadaada koowaad ee dhakhtarka ama isku darka MA / PhD, MSc / PhD, ama MD / PhD.
Ku sii qor diiwaangelinta barnaamijkaaga takhasuska oo sii wad inaad muujiso waxqabad tacliimeed oo heer sare ah.
Waa inaadan dhammeystirin wax ka badan 20 bilood oo ah daraasadaha takhasuska illaa May 1, 2020
Waa inaad ku guuleysatay celcelis heerka koowaad ah, sida ay go'aamisay hay'addaadu, mid kasta oo ka mid ah labadii sano ee ugu dambeysay ee daraasad waqti-buuxa ah ama u dhiganta.
Codsadeyaashu waa inaysan qaban ballanta macallinimada si isku mid ah deeqda waxbarasho ee Vanier ilaa ay ka diyaarsadaan fasax ka maqnaanshaha ballanta.
Shakhsiyaadka hadda haysta ama qabtay deeq waxbarasho ama heer jaamacadeed ah mid ka mid ah saddexda hay'adood ee bixiya cilmi-baarista federaalka, CIHR, NSERC ama SSHRC, xaq uma lahan inay codsadaan Vanier CGS.
Sideen U Dalbadaa Vanier Canada Shahaadada Qalinjabinta?
Kadib waa inaad ka gudubtay dhammaan shuruudaha kor ku xusan, musharrixiinta waa inay soo xushaan hay'adda ay rabaan inay waxbartaan maadaama musharrixiinta aysan si toos ah u codsan karin barnaamijka deeqaha waxbarasho ee Vanier Canada sidoo kale hay'addaadu waa inay ogaataa inaad dalbaneysid deeqdan waxbarasho.
Codsadeyaashu waa inay haystaan ​​dukumiintiyada soo socda ee ay hayaan oo loo isticmaali doono magacaabista Vanier CGS, xirmooyinka oo dhammaystiran waa;
Foom codsi ResearchNet ah oo ay ku jiri doonaan laba warqadood oo tixraac ah, mid walbana leh saddex qaybood.
A CV-ga caadiga ah ee reer Kanada (CCV)
2-bog ah bayaanka hogaaminta shaqsiga
2-bog ah warqadaha hogaaminta tixraaca
2-bog ah soo jeedinta cilmi baarista
5-bogga tixraaca mashruuca
Abuuri a Koontada ResearchNet una soo gudbi dhammaan dukumintiyada kor ku xusan meelaha saxda ah oo si sax ah u buuxi meelaha kale ee bannaan ee loo baahan yahay. Iskuulkaagu wuxuu heli doonaa xogtaada oo ay la socdaan kuwa kale oo badan wuxuuna sameyn doonaa xulasho.
Ka dib iskuulkaagu waa inuu soo xulay musharixiinta, xogta musharixiintaan la magacaabay kadib waxay hay'addu u diri doontaa guddiga xulashada ugu dambeysa ee Vanier CGS si ay u sameeyaan xulashada ugu dambeysa.
Ugu dambeyntiina, guuleystayaasha waxaa loo diri doonaa emayl si ay u ogaadaan in loo xushay deeqda waxbarasho ee qalin-jabinta Vanier Canada.
Tani waxay soo afjartay maqaalkan ku saabsan sida loo codsado loona guuleysto deeqaha waxbarasho ee Vanier Canada, faahfaahin kasta oo muhiim ah ayaa la siiyay si ay kaaga caawiso helitaanka deeqdan waxbarasho.
Si aad wax badan uga ogaato deeqaha waxbarasho ee Kanadiyaani ka eeg qodobkan 27 jaamacadaha ugu sareeya Kanada oo leh deeqo waxbarasho dugsiyadan waxay leeyihiin deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee dhammaan heerarka waxbarasho.
deeqda waxbarasho ee kanadaVanier Canada deeqaha waxbarashoDeeqaha waxbarasho ee Vanier Canada
Previous Post:Kharashka ku baxa Dibedda
Post Next:4 Koorsooyinka Qalinjabinta ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Xilligan Furan
Pingback: Sida Loo Codsado Jaamacadda Kanada - Tallaabada Tallaabada Tallaabada 2021